आफ्नै शब्दमाः नेपालको सीमान्तकृत समुदायहरूलाई सहयोग - पिपुल इन नीड
आफ्नै शब्दमाः नेपालको सीमान्तक...
आफ्नै शब्दमाः नेपालको सीमान्तकृत समुदायहरूलाई सहयोग
१८ अगस्ट २०२०
समावेशीताअल्पसंख्यकसमायोजनसामाजिक बहिष्कारWorld Humanitarian Day
शिखा जोशी, पिपुल इन नीड (पिन) मा काम गर्न थालेको लगभग ४ वर्ष भयो । विकास क्षेत्रमा काम गरेको डेढ दशक पछि लगभग चार वर्ष अघि पिपुल इन नीड (पिन), नेपालमा सामेल भए । ४६ वर्षिय दुई बच्चाकि आमाको लागि, “विपन्न र सीमान्तकृत मानिसहरूलाई मर्यादित जीवन बिताउन” मद्दत गर्नु व्यक्तिगत र पेशागत सफलता हो । नेपालको विकास क्षेत्रमा काम गरेका जोशीले हालसालै कोभिड–१९महामारीको क्रममा उनको अनुभवको बारेमा चर्चा गरे र उनको कार्य परियोजनाको कार्यान्यवनको लागी योजना “ख” हुनु सँधै बुद्धिमानी हुने बताइन् ।
तपाईं मानवीय कार्यकर्ता कसरी बन्नुभयो? तपाईंले यो काम किन रोज्नु भयो ?
यस मानवीय कार्यप्रति मेरो गहिरो चासोको कारणले गर्दा मैले विकासको क्षेत्रमा आफ्नो क्यारियर बनाउने निर्णय गरें । म विगत १५ बर्ष भन्दा बढि विकास क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छु । स्वास्थ्य र पोषण, शिक्षा, मानव अधिकार, बाल कल्याण र सामाजिक संरक्षण र एचआईभी/एड्स जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । म सहभागी भएको थिए प्राय सबै परियोजनाहरू नेपाल सरकारको सहयोगमा कार्यान्वयन भइ दिगो परिणामहरू दिएका थिए ।
विपन्न र सीमान्तकृत मानिसहरूलाई मर्यादित जीवन बिताउन सहयोग गर्दा यसले मलाई असीम आनन्द प्रदान गर्दछ । उनीहरूको मुस्कानले मलाई खुशी र सन्तुष्टि दिन्छ जुन पैसाले किन्न सकिन्दैन ।
तपाईं कहिले पिनमा सामिल हुनुभयो ? तपाईको पद के हो ?
पिनमा सामेल हुनुभन्दा अघि मैले २०१५ को विनाशकारी भूकम्पको बेलामा फ्रन्टलाइन कार्यकर्ताको रूपमा काम गरें, र मैले पहिरो र बाढी प्रतिक्रिया कार्यान्वयनको क्रममा सहयोग गरें । म डिसेम्बर २०१६ मा पिनमा सामेल भएँ, र २०१७ देखि भूकम्पबाट बिस्थापित भएका घरधुरीमा केन्द्रित एक परियोजनामा संलग्न भएको छु । यस कार्यक्रमले २०१५ को भूकम्प पीडितलाई सरकारले सहयोग गर्नका लागि बनाएको नीति र पुनर्वास योजनाको लाभहरू– “जग्गा अनुदान” र “आवास अनुदान” को सुविधा दिएर मद्दत पु¥याउँछ । थप रूपमा, परियोजनाले सामाजिक संरक्षण र महिला सशक्तिकरणको सुनिश्चिततालाई पनि ध्यानमा राख्छ ।
समुदायहरूले सामना गरिरहेका सबैभन्दा ठूलो अवरोध के हो ?
नेपाल, विश्वका जलस्रोतमा धनी देशहरू मध्ये एक मानिन्छ, विडम्बनाका कुरा त के छ भने पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई एकदम पानीको अभाव छ । यी क्षेत्रका धेरै बासिन्दाहरू साना मुहान र नालाहरूको भर पर्छन्, र उनीहरू प्रायः घरेलु उपयोगको लागि पानी ल्याउन घण्टौ खर्च गर्छन् ।
मेरो परियोजनाको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत समुदायमा परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि महिला समूहहरूलाई सानो अनुदान प्रदान गरिन्छ । ९० प्रतिशत कोषहरू सफा खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छतामा सुधार गर्न प्रयोग गरिएको छ ।
तपाईको दैनिक काममा तपाईले कस्ता कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्दछ ?
हामीले कार्य गर्ने अधिकांश क्षेत्रहरू दुर्गम हिमाली क्षेत्रहरू हुन्, सडकमा पहुँच र सुविधाहरूको अभाव रहेको छ । धेरै जसो ठाउँहरू पहिरोको खतरामा छन्, जुन वर्षायामको समयमा झन् खराब हुन्छ । वर्षा सुरु भए सँगै पहुँच अझ गाह्रो हुन्छ र हिडेर जाने मात्रै एक विकल्प हुन्छ ।
कोभिड–१९ ले तपाईंको काममा कसरी असर गर्यो?
कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपालमा तीन महिना सम्म लकडाउनमा भयो, र हाम्रो सबै कामहरु हामीहरुले घरबाट नै गर्न बाध्य भयौं । हाम्रो सबै क्षेत्रहरुमा काम रोक्नु पर्यो र फोनबाट सबै अन्तर्वार्ताका कामहरू सञ्चालन गर्यौ । अब, सरकारले प्रतिबन्धहरू कम गर्यो तर कोभिड १९ का घटनाहरू आझै पनि बढिरहेका छन् । हामीसँग आफूले पालना गर्नुपर्ने र आफू सुरक्षित रहनको लागि मानव संचालन प्रक्रिया (SOP) हरू छन् । तसर्थ, मैले मेरो सहकर्मीहरूको ख्याल राख्नुपर्दछ र मेरो आफ्नो कामका अतिरिक्त मेरा सहकर्मीहरूको शारीरिक र भावनात्मक हितको पनि सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
त्यस्ता केहि ठूला चुनौतीहरू र अवरोधहरू, त्यसलाई कसरी कम गर्नुभयो ?
जब कोभिड–१९ महामारी फैलियो र देशव्यापी लकडाउन भयो, मैले नेतृत्व गरेको परियोजना लगभग अन्तिम चरणमा थियो । अनुगमन र मुल्यांकनका गतिविधिहरू पूरा गर्न बाकि थियो । सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग कामको मुल्याङकन गर्नु पर्ने थियो, र सम्भावित संस्थाहरूलाई परियोजना पूरा भएपछि बाँकी कार्यहरू लिनको लागि पहिचान गरियो ।
हामीले यी सबै गतिविधिहरू पूरा गर्ने वैकल्पिक तरिकाहरूको विकास गरेका छौं, उदाहरणका लागि, भर्चुअल बैठकहरू आयोजना गरेर र लाभग्राही, स्थानीय साझेदारहरू र सामाजिक परिचालन कर्ताहरूद्वारा रेकर्ड गरिएका फोटोहरू र भिडियोहरू देखाएर ।
अहिलेसम्मको कार्यबाट तपाईंले के पाठ सिक्नुभयो?
मानवीय कार्य गर्न सजिलो छैन, तपाईंले विभिन्न चुनौति र अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्दछ र उचित प्रभाव पार्न तपाईंले तुरुन्त समस्याहरू समाधान गर्नुपर्दछ । सोचविचार गर्नुपर्दछ, तपाईको कार्यहरूको नतीजा हेर्नको लागि दूरदृष्टि राख्नु पर्दछ, र सावधानीपूर्वक निर्णय लिनुपर्दछ । यदि तपाईंको पहिलेको योजना विफल हुन्छ भने तपाईंसँग आकस्मिक योजनाहरू पनि हुनु आवश्यक छ र त्यसको लागि तपाईंले वैकल्पिक विधिहरू प्रयोग गर्न पनि तयार हुनुपर्दछ ।
लकडाउनले तपाईंको व्यक्तिगत जीवनमा कस्तो चुनौतीहरू ल्यायो?
मैले अचानक महसुस गरें कि मेरो संसार मेरो घरमा सीमित छ, र मैले काम गरेका मानिसहरू छुट्टै संसारका हुन् । मेरो लागि घरबाट काम गर्नु पूर्ण नयाँ थियो । सामान्यतया मेरो कामको लागि लामो यात्राको आवश्यकता पर्दछ, पहिले म घरमा त्यति धेरै समय दिन सक्दिनथें । लकडाउनको शुरुआती हप्ताहरूमा मलाई रमाईलो लाग्यो, तर पछि एकदमै अल्छि र निरास भए । मलाई मेरो काम झन् बढेको जस्तो लाग्यो, किनकि मैले आफ्नो काम पनि गर्नुपरथ्यो र आफ्ना बच्चाहरूलाई उनीहरूको अध्ययन र अनलाइन कक्षामा मद्दत पनि गर्नु पर्ने थियो । मलाई लाग्थ्यो कि घरबाट काम गर्दा मेरो दक्षतामा कमी भयो किनकि म जसरी पहिले आफ्नो काम छिटो गर्न सक्थे घर बसेर छिटो गर्न सकिन । म अब प्रोग्रामेटिक कामको सट्टा बढी प्रशासनिक कार्यहरूमा संलग्न छु ।
लेखक: सजना श्रेष्ठ , संचार अधिकृत पिपुल इन नीड